Does God overtake man's life? - Zomi Adventist Innkuan
Does God overtake man’s life?
လူ၏အသက်ကိုဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်း၍ လူသည်သေရသည်ဟုဆိုလျှင် မှားလော၊ မှန်လော
simple sermon deep theology
Mat 13:34, 35
uncommon sermon idea
Mat 7:28, 29, Jn 7:46
– မှန်သည်မမှန်သည်ကိိုသိခြင်းငှါ၊ ကျမ်းစာကို နေ့တိုင်း အစဉ် စေ့စေ့ကြည့်ရှုကြ၏။ – ကိုယ်တော်သည် သွန်သင်တော်မူသောကြောင့် စီရင် တော်မူချက်တို့မှ အကျွနု်ပ်လွဲ၍မသွားပါ။
– သက်သေခံတော်မူချက်တို့ကို အကျွနု်ပ်သည် ဆင်ခြင် အောက်မေ့သောကြောင့်၊ အကျွနု်ပ်၏ဆရာအပေါင်းတို့ထက် သာ၍နားလည်ပါ၏။ တ ၁ရး၁၁၊ ဆာ ၁၁၉း၁၀၂၊ ၉၉ –##–
“ကိုယ်ခန္ဓာကိုသာသတ်၍ စိတ်ဝိညာဉ်မသတ်နိုင်သော သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်” post ၏အဆက်၊
ယခုမျက်မှောက်သေရခြင်းသည် လူ၏အသက်ကို ဘုရား သခင်ရုပ်သိမ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ခရစ်ယာန်တိုင်းလိုလို ယုံကြည်ကြသည်။ ယခုမျက်မှောက်သေရခြင်းသည် လူ၏အ သက်ကို ဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်းသောကြောင့်ဖြစ်လျှင် သေသည် မဟုတ်၊ အိပ်ပျော်သည်ဟု ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြစရာအကြောင်း မရှိပေ။
စာတန်မာရ်နတ်သည် လူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသတ်၍ သေစေ သော်လည်း လူ၏အသက်ကိုမသတ်နိုင်၊ မသေစေနိုင်သဖြင့် စာတန်မာရ်နတ်ကြောင့်သေသောသူသည် “သေသည်မဟုတ်၊ အိပ်ပျော်သည်။- ထမြောက်လိမ့်မည်”ဟု မာ ၅း၃၉၊ ယော ၁၁း၂၃ ကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အိပ်ပျော်သောသူ၌ အသက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လူ၏အသက်ကို ဘုရားသခင်မရုပ်သိမ်းပါ။ ###
ဘုရားသခင်သည် လူကိုသူ့အပြစ်ခံစေပြီးသေစေမည့်အ စား လူဇာတိခံယူသောခရစ်တော်သည် လူ၏အပြစ်ကိုခံယူပြီး လူသေမည့်အစား၊ လူ့ကိုယ်စားသေခဲ့သည်။
“လူသားသည် မိမိအသက်ကိုစွန့်၍ လူများကိုရွေးခြင်းငှါ ကြွလာသတည်း။ – ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း ငါတို့ အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏။” မာ ၁း၄၅၊ ၁ကော ၁၅း၃
ထိုနည်းတူ၊ ဘုရားသခင်သည် လူ၏အသက်ကိုရုပ်သိမ်းပြီး လူကိုသေစေမည့်အစား လူဇာတိခံယူသောခရစ်တော်သည် သူ၏အသက်ကို ဘုရားသခင်အားရုပ်သိမ်းစေတော်မူသည်။ “ယေရှုသည်လည်း ကြီးသောအသံနှင့် ကြွေးကြော်တော် မူပြီးလျှင်၊ အိုအဘ၊ အကျွနု်ပ်စိတ်ဝိညာဉ်(spirit)ကို ကိုယ် တော်လက်၌ အကျွနု်ပ်အပ်ပါ၏ဟုမိန့်တော်မူလျှက် အသက် ချူပ်တော်မူ၏။” လု ၂၃း၄၆
“ထို့ကြောင့် ၁ပေ ၃း၁၉၊ ၂၀ ကျမ်းချက်၏ဆိုလိုချက်အမှန်မ သိရှာသောသူများသည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာသေပြီး သူ၏ စိတ်ဝိညာဉ်(spirit)သည် ထောင်ထဲမှာလှောင်ထားသော ဝိညာဉ်(spirits)တို့ထံသွားပြီး တရားဟောတော်မူ၏ဟု မှား ယွင်းစွာဟောပြောသွန်သင်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဟောပြောသွန် သင်ခြင်းသည် ဘာကြောင့် မှားယွင်းသောဟောပြောသွန်သင် ခြင်းဖြစ်သနည်း။
အကြောင်းမှာ ခရစ်တော်သည်မသေမီ သူ၏စိတ်ဝိညာဉ် (spirit)ကို ကိုယ်တော်လက်၌အပ်နှံပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် ၁ပေ ၃း၁၉၊ ၂၀ ကျမ်းချက်၏ဆိုလိုချက်အ မှန်သိရှိဖို့လိုအပ်သည်။”
ဘုရားသခင်သည် လူ၏အသက်ကိုရုပ်သိမ်းပြီး လူကိုသေစေမည့်အစား လူဇာတိခံယူသောခရစ်တော်သည် သူ၏အ သက်ကို ဘုရားသခင်အားရုပ်သိမ်းစေပြီးဖြစ်သောကြောင့် လူ ၏အသက်ကို ဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ယခုမျက်မှောက်သေ(အိပ်ပျော်)ရခြင်းသည် လူ ၏အသက်ကို ဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်းသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စာ တန်မာရ်နတ်သည် ကိုယ်ခန္ဓာကိုသတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ကိုယ်ခန္ဓာကိုသာသတ်၍” မ ၁၀း၂၈ ###
စာတန်မာရ်နတ်လည်း လူ၏အသက်ကိုမသတ်နိုင်၊ မသေစေနိုင်၊ ဘုရားသခင်လည်း လူ၏အသက်ကိုမရုပ်သိမ်းသော ကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာစာတန်မာရ်နတ်သတ်၍သေသောသူကို ကျမ်းစာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
– ငါအသက်ရှင်သည်အရာမှာ ခရစ်တော်ဖြစ်၏။”
– သင်တို့အသက်သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုရား သခင်၌ဝှက်ထားလျှက်ရှိ၏။ မာ ၅း၃၉၊ ယော ၁၁း၂၃၊ ဖိ ၁း၂၁၊ ကော ၃း၃
ထို့ကြောင့် အိပ်ပျော်သောသူ၌ အသက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သင်္ချိူင်း၌အိပ်ပျော်သောသူသည်၊ မြေမှုန့်၌အိပ်ပျော်သောသူ သည် ကောင်းသောမျိူးစေ့၊ အသက်ရှိသောမျိူးစေ့ဖြစ်သည်။ “သင်တို့သည် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောမျိူးစေ့အား ဖြင့် ဖြစ်ဖွားသည်မဟုတ်။
– မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောမျိူးစေ့ တည်းဟူသော အသက်ရှင်၍အစဉ်အမြဲတည်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်ဖွားသောကြောင့်၊
– ထိုသူ၌မျိူးစေ့တော်တည်လျှက်ရှိ၏။” ၁ပေ ၁း၂၂၊ ၂၃၊ ၁ယော ၃း၉
ထို့ကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာကိုစာတန်မာရ်နတ်သတ်၍သေသော သူသည် “သေသည်မဟုတ်၊ အိပ်ပျော်သည်။- ထမြောက်လိမ့် မည်။” မာ ၅း၃၉၊ ယော ၁၁း၂၃၊
See also လူအားလုံးအမိဝမ္းမွစ၍ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူထာဝရအသက္႐ွင္
ထို့ကြောင့် ယခုမျက်မှောက် စာတန်မာရ်နတ်သည် ကိုယ် ခန္ဓာကိုသတ်ပြီး စာတန်မာရ်နတ်ကြောင့်သေရခြင်းသည်”သေသည်မဟုတ်၊ အိပ်ပျော်သည်။” မာ ၅း၃၉
ယခုမျက်မှောက် ကိုယ်ခန္ဓာကိုစာတန်မာရ်နတ်သတ်သော ကြောင့် စာတန်မာရ်နတ်အားဖြင့်သေရပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအရိုးအ သားပျက်စီးရခြင်း၊ ပုပ်သိုးရခြင်းသည်”ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ပုပ်စပ်ခြင်းသို့မရောက်” ယော ၃း၁၅၊ ဆာ ၄၉း၉
ယခုမျက်မှောက် ကိုယ်ခန္ဓာကိုစာတန်မာရ်နတ်သတ်သော ကြောင့် စာတန်မာရ်နတ်အားဖြင့်သေရပြီး ကိုယ်ခန္ဓာမြေမှုန့်သို့ ပြန်ရခြင်းသည် “မြေမှုန့်၌အိပ်ပျော်ခြင်း၊- မြေမှုန့်၌နေခြင်း၊ – သင်္ချိူင်း၌ရှိခြင်း” ဖြစ်သည်။ ဒံ ၁၂း၂၊ ဟေ၂၆း၁၉၊ ယော ၅း၂၈
ထို့ကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာကိုစာတန်မာရ်နတ်သတ်၍သေသော သူအားလုံး အိပ်ပျော်သူများဖြစ်ကြသဖြင့် ထမြောက်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုခရစ်လူသားအားဖြင့် လူအတွက် ထမြောက်ခြင်းတရားရှိလာသည်။ “သေသောသူတို့၏ထမြောက်ခြင်းတရားသည် လူအား ဖြင့်တည်လျက်ရှိ၏။
– ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ ကောင်းကင်အရပ်၌ နေရာပေးတော်မူပြီ။
– သင်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူထမြောက်သည်မှန်လျှင် ဘုရားသခင်၏လက်ျာတော်ဘက်မှာ ခရစ်တော်သည် ထိုင်နေတော်မူရာအရပ်၌ရှိသော အထက်အရာတို့ကိုရှာကြလော့။” ၁ကော ၁၅း၂၁၊ ဧ ၂း၆၊ ကော ၃း၁ ထို့ကြောင့် လူ၏အသက်ကို ဘုရားသခင်မရုပ်သိမ်းပါ။ ###
လူ၏အသက်ကို ဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်းလျှင်၊ လူသည်သေပြီး မြေမှုန့်သို့ပြန်သွားမည်၊– စသည်ဖြင့် ကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြခြင်း သည် အပြစ်သားလူကိုဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိလျှင်၊ မချစ် လျှင်၊ မရွေးနှုတ်လျှင် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်မည့်အရာကိုဖော် ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားလူကိုမုန်း၍အလို တော်မရှိခဲ့လျှင်— လူ၏နှာခေါင်းထဲသို့မှုတ်သွင်းသောဇီဝအ သက်(အသက်ဝိညာဉ်)ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီး လူသည် ထာဝရသေရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ မြေမှုန့်ဖြင့်ဖန်ဆင်းသော လူ၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် မြေမှုန့်သို့ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းအရာကို ကျမ်းစာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။
“ဘုရားသခင်သည် လူကိုအလိုတော်မရှိ၍ လူ၏အသက် ဝိညာဉ်ကို ရုပ်သိမ်းတော်မူလျှင်၊ – ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့သည် ချက်ချင်းသေပျောက်၍ မြေမှုန့်သို့တစ်ဖန် ရောက်ကြလိမ့်မည်။
– သူတို့အသက်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မူလျှင် သူတို့သည်သေ၍ မိမိတို့မြေမှုန့်ထဲသို့ပြန်သွားကြပါ၏။
– ထိုကာလ၌ မြေမှုန့်သည်နေရင်းမြေသို့၎င်း၊ ဝိညာဉ်(အ သက်)သည် အရင်ပေးတော်မူသောဘုရားထံသို့၎င်း ပြန်သွားရ လိမ့်မည်။
– အကြောင်းမူကား၊ သင်သည်မြေမှုန့်ဖြစ်၍ မြေမှုန့်သို့ပြန်ရ မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။
– အလုံးစုံတို့သည် မြေမှုန့်ထဲကဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြေမှုန့် ထဲသို့ ပြန်သွားတတ်ကြပါ၏။” ယောဘ ၃၄း၁၄၊ ၁၅ ဆာ ၁၀၄း၂၉ ဒေ ၁၂း၇ က ၃း၁၉၊ ဒေ ၃း၁၀
အထက်ပါကျမ်းချက်များသည် အပြစ်သားလူကို ဘုရားသ ခင်အလိုတော်မရှိလျှင်၊ မချစ်လျှင်၊ မရွေးနှုတ်လျှင် ဘုရားသခင် လုပ်ဆောင်မည့်အရာကိုဖော်ပြပြီး အပြစ်သားလူ၌ဖြစ်ပျက်မည့် အခြေအနေကိုလည်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်သား၌ထိုကဲ့ဖြစ်ရန် ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိသဖြင့် လူဇာတိခံယူသော ယေရှုခရစ်၌ထိုကဲ့သို့ဖြစ်စေပြီး အထက်ပါ ကျမ်းချက်များကို ယေရှုခရစ်၌ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် အပြစ်သားလူသည် အသစ်ပြန်လည် ဖန်ဆင်းခြင်းခံ သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာကြပြီး လူ၏ အသက်ကို ဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်းစရာမလိုတော့ပါ။ ###
“ရွေးလျှင် အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ရာ၏။ ပုပ်စပ်ခြင်းသို့မ ရောက်”ဆာ ၄၉း၉ ကျမ်းချက်၏တောင်းဆိုမှုအတိုင်း ရွေးလျှင် မဟုတ်တော့ဘဲ ရွေးနှုတ်ပြီးဖြစ်သဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းခံလူသည် ဝိညာဏကိုယ်၊ ထမြောက်သောကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဖြစ်လာပြီး အစဉ် အမြဲအသက်ရှင်ရ၏၊ ပုပ်စပ်ခြင်းသို့မရောက်။
ထို့ကြောင့် လူ၏အသက်ကိုဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်း၍ သေ ရခြင်းမဟုတ်ဘဲ လူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို စာတန်မာရ်နတ်သတ်၍ သေ(အိပ်ပျော်)ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို စာတန်မာရ်နတ်သတ်၍ စာတန်မာရ်နတ်ကြောင့်သေ(အိပ်ပျော်)ရသောရွေးနှုတ်ခြင်းခံ လူအားလုံး ထမြောက်ချိန်ရောက်လာသောအခါ သေခြင်းမှထ မြောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ အချိူ့တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားဖို့ထမြောက်ကြမည် ဖြစ်ပြီး အချိူ့တို့သည် ငရဲသွားဖို့ထမြောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်၏အခသေခြင်းကိုခံသောခရစ်တော်သည် သေခြင်း မှထမြောက်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားတာ လား၊ ကိုယ်ခန္ဓာမပါဘဲသူ၏ဝိညာဉ်အားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံ သွားတာလား။
ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း ဆက်လက် post တင်မည်။
ဖတ်ရှုသူတိုင်း လူ၏အသက်ကိုဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်း၍ သေ(အိပ်ပျော်)ရခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သိသူများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ–
Tags: Lak Len
Prev post ပုိင္႐ွင္႐ွိ
Next post Piansakna leh Pukna